Xishoodka dumarka iyo marka ugu horeyso ee caadada dhiigga ay isku arkaan. | STN Somali
Home Wararka Xishoodka dumarka iyo marka ugu horeyso ee caadada dhiigga ay isku arkaan.
Xishoodka dumarka iyo marka ugu horeyso ee caadada dhiigga ay isku arkaan.
“Aabo waxu qeybiyay cabitaan, hooyana qoyska oo idil ayay u sheegtay arinkii”..Waa xaalad ay gabdhaha Carbeed la kulmaan marka ugu horeyso oo ay caadada dhiigga isku arkaan.
ka dib markii mid ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay ay u ogaalaatay in haweenka u shaqeeyo helaan hal maalin fasaxa xiliga uu ku dhaco dhiiga caadadda ah ayaa isbuucaani waxyaalihii ugu badnaa ee ay dadku soo waydiiyeen barta raadinta Google (Ingiriis: google search) ay noqotay caadada dhiigaa ee ku dhacdo dumarka.
Gabdhaha qaarkood ayaa ka hadlay maalintii ugu horeysay ee uu dhiigga ku dhacay, waxa ay daremeen iyo falcelintii ay kala kulmeen waalidkooda.
Waxay aheyd maalin ka mid ah maalmihii ugu waynaa nolosheeda, Diina ayaa ku bilowday hadalkeedii iyadoo ay ka hadleysay maalinta koowaad ee uu Caadada dhiigga uu ku dhacay.
Waxayna tiri: “Waxaan u tagay Aabo sababtoo ah Hooyaday waa ay dhimatay, aad baan uga baqayaa inaan ku dhaho dhiig baa lugahayga ka socda, dhaawac ayaan ahay.
Marki aan u sheegay waxuu iila cararay isbitaal, Dhakhtarkii ayaa ku yiri gabadhaada waa ay ladantahay, dhiiggaan ka socdana waa dhiiggii Caadada ahaa oo haday qaangaartay, Farxad darteed wuxuu aabo u qaybiyey kalkaaliyeyaashii Cabitaan Peps ah.
Xaanaan oo iyadana ka sheekeyneysa maalinteedii kowaad ayaa waxay tiri: ” in yar oo macluumaad ah oo ay iiga sheekeeyeen gabdho saaxiibadey ah ayaan heystay markuu igu dhacay dhiigga, waxaaan u sheegay markiiba hooyadey.
Waxay sii waday hadalkeedii: ” Si lamafilan ah, waxaan arkey hooyadey oo ii hanbalyeyneyso, lana xiriirayso ayeeyday, habaryar iyo eedo oona u sheegayso iyadoo farxad wajigeeda ka muuqdo inuu dhiigii igu dhacay, ka dib ayey bilawday iney i fahansiiso arinkii, waxaan sameyn lahaa iyo sidaan nadaafada ugu dadaali lahaa.”
Previous articleFaahfaahino Kasoo baxaya Qaraxa ka dhacay Wadada Maka Al-Mukarama ee Muqdisho
Next articleDowladda Eriteriya oo ku eedeysay dalka Turkiga inuu ku dhaqaaqday “ficil-foolxun”.